China YN Dredge Pumps Mugadziri uye Mutengesi | Winclan
YN akateedzana Dredge Pumps ari yakatwasuka cantilevered imwechete nhanho, imwechete yekukweva pombi. Kazhinji. Yakakura yekucheresa kudzika, kukwirira kwesimba kwekuchera matope, NPSH yakanaka uye yakasimba yekukweva kusimudza kugona. inoshandiswa muchikepe chepasi pegungwa. Unogona kuzadzisa zvese zvinodiwa kubva kune iyo dredge.
Kugona / Kuyerera: 1800-25000m3 / h
Musoro / Simudza: 20-78m
Kurumidza: 180-550 rpm
PH yepakati: 5-12
Caliber: 300mm -1000mm
YN yakateedzana dredge pombi yakagadzirirwa iyo yekucheresa uye damming yedziva, rwizi uye zvimwe kuvaka
Kubvisa Hopper Kuchera
Kugadziriswa kwejecha jecha
1. Chimiro chakanakira kukweva chikepe: Yakasimba kuburikidza-isa. Iyo pombi inogona kuramba ichingoburitsa mavhu, epurasitiki yevhu bundu, nezvimwe. Iyo pombi inogona kuenzaniswa zvakananga neiri mota kana injini yedhiziri.
2. YN mhando pombi inotora pamberi-disassembly mamiriro mukufarira zviri nyore disassembly uye kugadzirisa. Zvakare inoshongedzerwa nematanho akakosha ekukatanura echikamu chimwe nechimwe chakasiyana zvinoenderana nechimwe chikamu maficha.
3. Iyo NPSH yakanaka yekuita yeWN mhando pombi inovimbisa yakasimba yekukweva kugona pamwe nekudzika kwakadzika kwekudzika kudzika uye denser kudonhedza kusungwa.
4. YN Type pombi yakanyorova-kumagumo chikamu inoshandisa iyo yakasimba simba antifriction simbi zvinhu (KmTBCr27), degree rekuomesa harisi rakaderera pane 58HRC, rine rakasimba kwazvo rinotakura iro kugona kugona uye kwakanaka kurira.
5. Iyo hydraulic dhizaini yeWN dredge pombi inotora CFD kuenderera nekuyerera kwemunda simulation, iyo pombi inoshanda yakakwira, panguva imwe chete inodzivirira mune inoyerera chiteshi iyo yakanyanyisa kukurumidza shanduko kune yekufashukira chikamu kukwezva, kudzora iyo yakasiya zvikamu zvikamu zvinoshandiswa.
6. YN dredge pombi kuti ive inogoneka kushandisa iyo yekupakata chisimbiso, iyo mechiniki chisimbiso, iyo skeleton chisimbiso (kudzoreredza mafuta), iyo bapiro nati (wedzera rabha chisimbiso), uye zvichingodaro pamarudzi mazhinji ezvidhindo mafomu.